ကျမရဲ့ အမှားတွေအပေါ် အမြဲအကောင်းမြင်တတ်သူ...
သူနဲ့ ကျမ အခက်အခဲတွေကို အတူတူကျော်ဖြတ်ခြဲ့ကဘူးတယ်..
ငွေမျက်နှာ တစ်ခုတည်းကြည့် အလွယ်တကူအထင်သေးတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ အကြည့်တွေ
ကြုံခဲ့ရင်လဲ ကျမရှေ့က ရင်ကိုကော့ပြီး မားမားမတ်မတ်ကာကွယ်ပေးတတ်တယ်..
ကျမကို ကလေးတစ်ယောက်လို အမြဲအလိုလိုက်တတ်ပြီး လူကြီးတစ်ယောက်လို
ဆုံးမတတ်တယ်။ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ကျမကိုလဲသူ့ လိုပျော်ပျော်နေတတ်စေ
ချင်တယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျမက အမြဲစိတ်ညစ်နေတတ်လို့လေ။
စကားကိုဘုကလန့် ပြောပြီးသူ့ အပေါ်မကြာမကြာစိတ်ကောက် တတ်တဲ့ကျမကို
နားလည်ပေးတတ်သလိုကြည့်နေတတ်တယ်။ကျမ ဘ၀မှာ ပျော်စရာတွေ သိပ်နည်း
အမြဲ လူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိူင်အောင်သင်ပေးရင်း ကျမဘာလိုချင်လဲဆိုတာကျမကိုယ်တိုင်
သိအောင် လမ်းပြပေးခဲ့တယ်..။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျမဟာ စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီး လမ်းစပျောက်
သူ့ လက်ကိုတွဲပြီး ဘ၀ကိုစခဲ့တုန်းကဆိုကျမလက်တွေက ခိုင်မြဲပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယ တစ်ဝက်
ယုံကြည်ချက်တစ်ဝက် လွန်ဆွဲနေခဲ့ကြတယ်။ ကျမရဲ့ မိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က
လူတွေရဲ့ စိန်ခေါ်တဲ့ အကြည့်တွေထဲမှာ ကျမစိတ်တို့သိမ်ငယ်နေခဲ့သလိုပဲ။
မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး သူခင်းတဲ့လမ်းမှာ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့ ခပ်ရဲရဲလျှောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါ
ကျမ သူ့ လက်ကို ခပ်တင်းတင်းတွဲထားခဲ့ ပြီးပြီ။
အားလုံးက ကျမအတွက်ချောက်ကမ်းပါးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျမအတွက်သူက ကံကောင်းခြင်းတွေ ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပြန်တယ်။
သူ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေက သူ့ ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူဆိုးတစ်ယောက်လို့ ထင်ယောင်ထင်မှား
ဖြစ်စေခဲ့ပါသလား။ ဒါ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ရူးသွပ်မူလို့ကျမတော့နားလည်ပေးလို့ ရရဲ့ ။
သူ့ ဆံပင်တွေကို ကျမသိပ်ချစ်တာလဲ ပါမှာပေ့ါလေ။
တခါတလေဂစ်တာတီးတဲ့အခါဝဲကျနေတတ်တဲ့ သူ့ ဆံပင်တွေက ကျမအတွက် ကဗျာတပုဒ်လား...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒိ အိမ်မက်တွေကို ကျမဆက်မက်နေဦးမှာ....
(သူ့ အတွက် အမှတ်တရ ရေးပါသည်)
စာရေးသူ ယွန်း မှ 1:11 AM
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ချစ်တော့မယ် ဆိုပါတော့ ကောင်းပါ့ဗျာ..
အရေးအသားလေးတွေ ပိုပြီးပိုပြီး ကောင်းလာပါတယ်.
အိုးးးး ကံကောင်းစေတဲ့ သူပဲ
ဆက်လက် လက်တွဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ
သူ နဲ. ထာဝရ လက်တွေ မြဲပါစေ လို.
thz bro လို့ ရေးထားတာကိုကြည့်ပြီးနောက်လိုက်တာပါ